Tsikin-drameva | Hevitra MPANOHARIANA
2008-01-12 @ 11:09 in Ankapobeny
Mifarana indray ity ny herinandro ka dia aleo ny tsikitsiky aloha no hamaranana azy. Ny Rameva tonga eto Madagasikara aloha izao no ambentin-dresaky ny manodidina ahy. Ny hoe maro miresaka azy aloha tsy azoko itompoana kosa. Iza kosa no tsy ho taitra raha maheno hoe misy Rameva tonga eto Madagasikara? Faniriana fahakely ihany ny hahita ny biby tsy fahita ho eto Madagasikara fa ny Liona sy ny Tigra ary ny Elefanta no tena masaka tao an-doha fa tsy dia noeritreretina loatra kosa ny hijery izany Rameva. Na izany aza nahoana tokoa moa raha mba mahita Rameva mivantana ny olona? Mety hilaharana indray izany ny hakany Iavoloha hijery azy fotsiny, na raha tsy tian’ny filoha moa ireto fanomezana voalohan’ny taona hafakely ireto dia tsy lavitra ny Lapa tsy akory ny zaridainan’I Tsimbazaza sy ny Lapan’ny Antanimieram-pirenena.
Oadray tokoa, dia samy manana ny zaridainany tokoa I Tsimbazaza sy Iavoloha an! Ao Tsimbazaza tokoa hay moa ny Biraon’ny Ben’ny tanàna eto Antananarivo. Fa ny ao Tsimbazaza ny biby sy zavamaniry tsy fiompy sy tsy famboly loatra no tena apetraka hotsidihan’ny olona fa ny any Iavoloha indray ny fiompy sy ny famboly no miranty ao. Fa lasa aiza indray ary ilay resaka rameva teo? Saiky hivily tokoa ny resaka marina. Ahoana indray ary ny vazivazin’ny namana: Hojeren’ny filoha indray izany hoe mahatratra firy litatra isan’andro no mety ho azo amin’ny rameva vavy iray, azo sotroina manko ny rononony, ary azo hanina hoe ny henany saingy tsy hanin’ny jiosy io satria tsy mivaky kitro araka ny fahalalako azy, nefa aleo aloha hojerena mivantana ihany. Dia raha misy filazana indray rehefa avy eo hoe hanafatra rameva be dia be isika dia mety hahazo tombony anatin’izany indray ilay orinasa efa midadasika tsy tononiko izay. Ny azy manko io ronono io ihany no tena mba angadiny…oadray talentany no marina kokoa.
Fa ny tena nahatapaka ny tsinaiko dia ilay saritatra nataon’i Tojo ao amin’ny joro “Passe-Par-Tojo” androany tao amin’ny Midi Madagasikara iny. Tsy naka alalana fa dia aleo tantaraina an-tsoratra ihany. Indreo ny Rameva fa mipetraka tsy dia lavitra loatra ny Lapa, ankevitry ny any ho any amin’ny faritra “fitaratr’i Madagasikara” any, anivon’ny biby sy ny zavamaniry. Misy mirahalahy miresaka eo ka hoy ny anankiray hoe: Il ne manque plus que les mages! (ny magy sisa no andrasana!). Efa tena raiki-tapisaka amin’ny olona tokoa noho ny sary fa rameva no nandehanan’ny magy na dia tsy mahatadidy izany loatra ao amin’ny baiboly aza aho. Dia misy zazalahikely mitondra manolotra tavy kely amin’ny rameva miteny hoe: Hinana Yaolta? (hihinana Yaourt?). Dia hoy aho hoe mbola tsy lasa lavitra tokoa ny Noely ry zareo. Noely fankalazana ny “ Fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no nomena antsika, ary ny anarany dia atao hoe Iman…uel” fa raha eto amintsika angamba noho ny fifidianana farany teo dia andeha atao hoe “raj…uel” (izy manko no nofidian’ny maro an’isa koa!). Dia ahoana izany? Ataonareo hoe Heraoda ny filoha izany? Tezitra amin’izany eo izy an!
Fa lasa ihany ny saiko ry zareo, nahoana moa ny efa nanana anarana hoe rameva ny rameva teo amin’ny Malagasy? Edrey! Tsy maintsy noho ny fitadiavana voambolana teo amin’ny baiboly ihany io ry nao a! tonga teo amin’ny tantaran’i Esao sy Jakoba, na Abrahama ohatra dia inona no atao anaran’ny biby tsy fahita eto Madagasikara? Tsatoka sy hanihany sisa fa raha misy moa ny tahirinkevitra milaza izany mety hahafinaritra ihany. Avy amin’izay ary ny Misionera mpandika teny nampiseho ny sary tamin’ny mpianatra (Malagasy) sady mpiara-mandika ny baiboly ho amin’ny teny malagasy rahateo. Dia avy ny Misionera niteny hoe “Kamela ity” na “Diraomadera ity”. Ny mpianatra kosa vatany vao nahita ny sarin’ilay biby dia nisy niteny hoe “Raha meva tokoa izy izany” Mety ny teny hoe madera avy tamin’ny Diraomadera izay mitovy dika amin’ny meva sy ny tsara ary ny soa sisa no henon’ny mpianatra mijery sary vao. Dia namerina ny misionera hoe “Diraomadera”, novalian’ny mpianatra ihany hoe “Eny e! Raha meva” Dia noraiketina ho Rameva ny anarana nifanarahana. Hanjohanjo ihany izany fa mety noho ny fitiavan’ny iray amin’ny mpandika teny tokoa, tsy fantatra na malagasy na vazaha, ny biby no nahatonga azy hoa rameva “nahazo anarana manomboka amin’ny Ra…” Angano angano à rire à rire…
ilay rameva miditra vodi-fanjaitra sisa tsy voatantaran-drajentl
Nampidirin'i Rajiosy @ 12:17, 2008-01-12 [Valio]
fa ilay rameva anie toa oe fanomezana avy any @ khadafy fa tsy oe novidiny baina akory e!
dia ireo ve zao hataty ny toetr'andro aty sa ahoana hoy nareo?
Nampidirin'i news2dago @ 14:02, 2008-01-12 [Valio]
Mahatanty tsara hoy ny mpiandraiki-draharaha libiana ka. Mahatanty tsy mihinankanina mandritra n iray volana hoe, mety ho fiarovana amin'ny aretina be dia be hoe ny rononony fa tsy nolazaiiny hoe inona avy ireo aretina arovany sy ny sisa hafa tsy voatanisa.
Nampidirin'i jentilisa @ 15:44, 2008-01-12 [Valio]